Fampandrenesan'ny mpanoratra - The Word Foundation
Ny sasin-tenin'ny mpamorona:
MISY fisainana sy fisainana
Ity boky ity dia nomena an'i Benoni B. Gattell nandritra ny fotoana nifanaovan'ny taona 1912 sy 1932. Hatramin'izay fotoana izay dia niasa hatrany hatrany izy io. Ankehitriny, ao amin'ny 1946, misy pejy vitsivitsy izay tsy niova kely akory. Mba hisorohana ny fiverimberenana sy ny fahasarotam-panafana dia nisy pejy iray manontolo nofafana, ary nanampy ampahany maro, fehintsoratra ary pejy aho.
Raha tsy misy fanampiana, dia tsy isalasalana raha nosoratana ny asa, satria sarotra amiko ny mieritreritra sy manoratra amin'ny fotoana iray ihany. Tsy maintsy nijanona ny vatako raha nieritreritra aho fa ny lohahevitra dia nofaritana ary nifidy teny mifanaraka amin'ny fananganana ny rafitry ny endrika: ary noho izany dia tena mankasitraka azy aho noho ny asa nataony. Tsy maintsy ekeko ihany koa ireo biraon'ny namana, izay maniry ny tsy hitonona anarana, noho ny soso-keviny sy ny fanampiana ara-teknika amin'ny fanatanterahana ny asa.
Ny asa sarotra indrindra dia ny fanamafisana ny fepetra hanehoana ny foto-kevitry ny fitanana an-tsoratra. Ny ezaka mafy nataoko dia ny hahita teny sy andian-teny izay hampita tsara ny dikany sy ny toetran'ny zava-misy sasany tsy azo tsapain-tanana, ary ny hampiseho ny fifandraisany tsy azo sarahina amin'ny tena ao anatin'ny vatan'olombelona. Taorian'ny fiovana miverimberina dia niorina tamin'ny teny ampiasaina ato aho.
Maro ireo lohahevitra tsy dia mazava loatra satria tiako izy ireo, saingy ny fanovana natao dia ampy na tsy misy fiafarana, satria ny famakiana tsirairay dia toa manovaova ny fiovana hafa.
Tsy maniry ny hitory amin'olona aho; Tsy mieritreritra ho mpitory teny na mpampianatra aho. Raha tsy tompon'andraikitra amin'ny boky aho, tiako ny tsy hisaina ny maha-olona ahy. Ny halehiben'ny lohahevitra izay atolotro fanazavana dia manafaka sy manafaka ahy amin'ny fiheveran-tena ary mandrara ny fitarainana amin'ny fahamaotinana. Manana fanambarana hafahafa sy mahavariana aho ho an'ny fahatsiarovan-tena sy tsy mety maty ao amin'ny vatana; ary maka antoka aho fa hanapa-kevitra amin'izay tiany na tsy hataony amin'ny fampahalalam-baovao.
Ireo olona manan-tsaina dia nanantitrantitra ny ilana ny hiteny eto mikasika ny zavatra niainako tany amin'ireo firenena nahatsiaro saina, sy ny fisehoan-javatra teo amin'ny fiainako izay mety hanampy amin'ny fanazavana ny fomba hahafahako mahafantatra sy manoratra momba ireo zavatra izay Mifanaraka amin'ny finoana ankehitriny. Milaza izy ireo fa ilaina izany satria tsy misy famoahana bibliôgrafia ary tsy misy references nomena mba hanamarina ireo fanambarana voalaza ato. Ny sasany amin'ireo zavatra niainako dia tsy tahaka ny zavatra reko na vakiana. Ny fisainako manokana momba ny fiainan'olombelona sy ny tontolo iainantsika dia nanambara tamiko ireo lohahevitra sy zava-niainana izay tsy hitako tato amin'ny boky. Saingy tsy azo eritreretina ny hihevitra fa mety ho toy izany ny zavatra toy izany, nefa tsy ho fantatry ny hafa. Tsy maintsy misy ireo izay mahalala kanefa tsy afaka milaza. Tsy misy antoka ny tsiambaratelo aho. Izaho dia tsy misy fikambanana na inona na inona. Tsy manimba finoana aho amin'ny filazana ny zavatra hitako tamin'ny fisainana; amin'ny fisainana tsy tapaka rehefa mifoha, tsy amin'ny torimaso na amin'ny tranzé. Tsy mbola nisy na oviana na oviana aho ary mbola iriko foana ny ho tretrika na inona na inona.
Ny zavatra tsapako fony aho nieritreritra momba ny lohahevitra toy ny toerana, ireo singan-javatra, ny lalàm-panorenana, ny faharanitan-tsaina, ny fotoana, ny endriny, ny famoronana sy ny fanavahana ny eritreritra, dia, manantena aho fa nanokatra faritra ho an'ny fikarohana sy ny fitrandrahana amin'ny ho avy . Amin'izany fotoana izany dia tokony ho anisan'ny fiainan'ny olombelona ny fitondran-tena tsara, ary tokony hifanaraka amin'ny siansa sy ny fitaovana. Amin'izay fotoana izay dia afaka manohy ny sivilizasiona, ary ny Independence amin'ny Responsibility dia ny fitsipiky ny fiainana manokana sy ny Governemanta.
Ity misy sombin'ny traikefa sasany tamin'ny fiainako taloha:
Ny rhythm no fahatsapako fifandraisana voalohany tamin'ity izao tontolo izao. Taty aoriana dia tsapako tao anatin'ny vatana aho ary naheno feo aho. Takatro ny dikan'ny feon'ireo feo; Tsy nahita na inona na inona aho, fa izaho kosa, amin'ny fahatsapako, dia afaka mahazo ny hevitry ny iray amin'ny teny-feo voambara, amin'ny rhythm; ary ny fahatsapako dia nanome ny endriky ny loko sy ny lokon'ireo zavatra voalazan'ny teny. Rehefa afaka nampiasa ny fahatsapana fahitana aho ary nahita zavatra, nahita ireo endrika sy fisehoan-javatra izay tsapako, raha nahatsapa aho, mba hifanaraka tsara amin'ny zavatra nosamboriko. Rehefa afaka nampiasa ny fahatsapan'ny maso, ny fihainoana, ny tsiro sy ny fofona aho ary afaka mangataka sy mamaly fanontaniana, dia hitako fa vahiny amin'ny tontolo hafahafa aho. Fantatro fa tsy ny vatako no niainako, fa tsy nisy olona afaka nilaza ahy hoe iza na iza aho na avy aiza na avy aiza, ary ny ankamaroan'ireo izay nadinadinoiko dia toa nino fa izy ireo no vatana niainan'izy ireo.
Tsapako fa tao anaty vatana izay tsy azoko afenina aho. Very aho, irery, ary nalahelo mafy. Ny zava-mitranga miverimberina sy ny traikefa dia niaiky fa tsy ny zavatra niseho tamin'izy ireo no zavatra; fa misy fiovana mitohy; fa tsy misy na inona na inona; fa matetika no milaza ny mifanohitra amin'izay tena eritreretiny. Ny ankizy dia nilalao lalao antsoina hoe "make-believe" na "aoka isika hidera". Ny ankizy nilalao, ny lehilahy sy ny vehivavy dia nampihatra finoana sy fisainana; Olona vitsy monja no tena marina sy tso-po. Nisy ny fako tamin'ny ezaky ny olombelona, ​​ary ny fisehoan-javatra dia tsy naharitra. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina Nanontany tena aho hoe: Ahoana no tokony hahatonga ny zavatra hitranga, ary hatao tsy misy ratra sy korontana? Ny ampahany iray amin'ny tenako namaly: Voalohany, fantaro izay tianao; Jereo ary tadidio ao an-tsaina ny endrika izay anananao izay tianao. Avy eo dia eritrereto sy alaharo ary lazao izany ho fisehoana, ary izay heverinao fa ho tafangona avy ao amin'ny rivotra tsy hita maso ary hiorina ao anatin'io endrika io. Tsy noeritreretiko avy eo ireo teny ireo, fa ireo teny ireo dia maneho ny zavatra noeritreretiko. Natoky aho fa afaka manao izany, ary niezaka mafy sy niezaka ela. Tsy nahomby aho. Raha tsy nahomby aho dia nahatsiaro ho henatra, malemy, ary menatra aho.
Tsy afaka nanampy ahy hitandrina ny fisehoan-javatra aho. Ny zavatra henoko lazain'ny olona dia ny momba ny zava-nitranga, indrindra fa ny fahafatesana, dia toa tsy nisy vidiny. Ny ray aman-dreniko dia mpivavaka be. Nandre izany aho ary nilaza fa Andriamanitra no nanao izao tontolo izao; Izy no namorona fanahy tsy mety maty ho an'ny vatan'olombelona tsirairay eto amin'izao tontolo izao; ary ny fanahy izay tsy nankatò an'Andriamanitra dia hatsipy any amin'ny helo ary hodorany amin'ny afo sy solifara mandrakizay mandrakizay. Tsy nino an'izany aho. Toa tsy nanaitra ahy ny niheverako na nino fa misy Andriamanitra na maha-olona afaka nanao izao tontolo izao na namorona ahy ho an'ny vatana izay niainako. Efa nandoro ny rantsan-tanako tamin'ny lalao brimstone aho, ary nino aho fa hodorana ho faty ny vatana; saingy fantatro fa izaho, izay tsapako tahaka ahy, dia tsy azo dorana ary tsy ho faty, fa tsy nahafaty ahy ny afo sy ny solifara, na dia nahatsiravina aza ny alahelo tamin'io fandoroana io. Nahatsapa loza aho, nefa tsy natahotra aho.
Ny olona dia toa tsy mahafantatra hoe 'nahoana' na 'inona', momba ny fiainana na ny fahafatesana. Fantatro fa tsy maintsy misy ny anton'izany rehetra izany. Te hahalala ny tsiambaratelon'ny fiainana sy ny fahafatesana aho ary hiaina mandrakizay. Tsy fantatro ny antony, saingy tsy vitako ny naniry izany. Fantatro fa tsy hisy alina sy andro ary fiainana sy fahafatesana, ary tsy misy izao tontolo izao, raha tsy misy ny hendry izay nitantana an'izao tontolo izao sy ny andro sy ny andro ary ny fiainana sy ny fahafatesana. Na izany aza, dia tapa-kevitra aho fa ny tanjoko dia ny hahita ireo olon-kendry ireo izay hilaza amiko ny tokony hianarako sy ny tokony ataoko, mba hanankinana ireo tsiambaratelon'ny fiainana sy ny fahafatesana. Tsy nieritreritra ny hilaza izany aho, ny fanapahan-kevitro mafy, satria tsy takatry ny olona; Nino izy ireo fa adala na adala aho. Efa fito taona teo ho eo aho tamin'io fotoana io.
Folo ambin'ny folo taona na mihoatra. Nahamarika ny fomba fijery samihafa momba ny fiainan'ny ankizilahy sy ankizivavy aho, raha nitombo izy ireo ary niova ho lehilahy sy vehivavy, indrindra nandritra ny fahazazany, ary indrindra fa ny ahy. Niova ny fomba fijeriko, saingy ny tanjoko - dia ny hitady ireo izay hendry, izay nahalala, ary avy aiza no hianarako ny tsiambaratelon'ny fiainana sy ny fahafatesana - dia tsy miova. Azoko antoka ny fisiany; Tsy misy izao tontolo izao, raha tsy misy azy ireny. Ao amin'ny filaharan'ireo hetsika dia hitako fa tsy maintsy misy ny governemanta sy ny fitantanana izao tontolo izao, toy ny tsy maintsy misy ny governemantan'ny firenena iray na ny fitantanana ny raharaham-barotra hanohizana ireo. Nanontany ahy ny zavatra ninoako ny reniko indray andro. Tsy nisalasala aho nilaza hoe: Fantatro fa tsy misy fisalasalana fa ny governemanta no manapaka an'izao tontolo izao, na dia toa ny porofo tsy azoko aza ny fiainako, satria tsy hitako izay azoko atao amin'ny zavatra fantatro sy izay tena iriko.
Tamin'io taona io ihany, teo am-piandohan'ny 1892 dia namaky tamin'ny gazety Alahady aho fa nisy Madam Blavatsky iray naha-olon-kendry tao atsinanana izay antsoina hoe Mahatmas; fa tamin'ny alalan'ny fiainana miverimberina teto an-tany, dia nahatratra ny fahendreny izy ireo; fa nahazo ny tsiambaratelon'ny fiainana sy ny fahafatesana izy ireo ary nametraka an'i Madam Blavatsky hamorona fikambanana teôsophika, izay ahafahana mampita ny fampianarany ho an'ny besinimaro. Hisy famelabelarana amin'io hariva io. Nandeha aho. Taty aoriana dia lasa mpikambana mafana tao amin'ny Fikambanana aho. Ny fanambarana fa nisy olon-kendry - tamin'ny anarana rehetra niantsoana azy - dia tsy nahagaga ahy; Izany dia porofo mivaingana fotsiny hoe inona no azoko antoka fa ilaina amin'ny fampandrosoana ny olona sy ny fitarihana sy ny fitantanana ny natiora. Namaky izay rehetra azoko atao momba azy ireo aho. Nieritreritra ny ho tonga mpianatra amin'ny iray amin'ireo olon-kendry aho; saingy nanohy ny fisainako ka nahatonga ahy hahatakatra fa ny tena làlana dia tsy tamin'ny alalan'ny fampiharana ara-taratasy ho an'ny olona, ​​fa mba ho ahy sy ho vonona. Tsy nahita na naheno aho, ary tsy nanana fifandraisana tamin'ny "hendry" tahaka ny nitiavako azy. Tsy nanana mpampianatra aho. Ankehitriny aho dia manana fahatakarana tsara kokoa momba ny raharaha toy izany. Ny tena 'Wise Ones' dia Triune Selves, ao amin'ny Fanjakan'ny Faharetana. Najanoko ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina rehetra.
Nanomboka tamin'ny novambra tamin'ny 1892 dia nandalo zava-niainana mahatalanjona sy manan-danja aho, taorian'izay, tamin'ny lohataona 1893, dia nisy ny zava-nitranga tena mahatalanjona indrindra teo amin'ny fiainako. Niampita ny arabe 14th aho tao amin'ny Avenue 4th, any New York City. Nandeha haingana ny fiara sy ny olona. Rehefa nidina nankany amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny tendrontany aho, Fahazavana, lehibe kokoa noho ny an'ny masoandro marobe izay misokatra eo afovoan'ny lohako. Tao anatin'izany fotoana na toerana izany, dia notanana ny mandrakizay. Tsy nisy fotoana. Tsy nisy porofo ny halavirana sy ny halavany. Ny natiora dia nahitana singa. Fantatro ny singa natoraly sy ny tarika toy ny Intelligences. Ao an-tsainy sy an-davany, raha ny filazako azy, dia misy lanjany lehibe sy kely kokoa; Ny lehibe kokoa dia ny manodinkodina ny lelavola kely, izay mampiseho ireo karazam-pitaovana samihafa. Ny fahazavana dia tsy natiora; Izy ireo dia fahazavana toy ny Intelligences, Light Lights. Raha oharina amin'ny hazavana na ny fahazavan'ireny hazavana ireny, dia tara-doha maivana ny tara-pahazavana manodidina. Ary tao anatin 'ny fahazavana rehetra sy ny singa rehetra ary ny zavatra rehetra dia nahatsapa aho fa nisy ny fahatsiarovan-tena. Tsapako fa ny fahatsiarovan-tena no tena zava-misy marina sy tsy misy dikany, ary mahatsapa ny fifandraisana amin'ny zavatra. Tsy nahatsapa fifaliana, fihetseham-po, na ekstasy aho. Ny teny dia tsy mahavita mamaritra na manazava ny CONSCIOUSNESS. Tsy mety ny manandrana manoritsoritra ny fahalehibiazana sy ny hery ary ny filaminana sy ny fifandraisany amin'ny zavatra tsapako tamin'izany fotoana izany. Indroa nandritra ny efatra ambin'ny folo taona nanaraka, dia nahatsiaro ny fahatsiarovan-tena aho nandritra ny fotoana lava isaky ny fotoana. Saingy nandritra izany fotoana izany dia tsy nahatsiaro tena mihoatra noho ny nahafantarako tamin'izany fotoana izany aho.
Ny mahatsiaro ny fahatsiarovan-tena dia ny andian-teny mifandray izay nofidiako ho fehezanteny iray momba ny fotoana tena manan-danja sy mahavariana eo amin'ny fiainako.
Misy ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny vondrona tsirairay. Noho izany ny fisian'ny fahatsiarovan-tena dia mahatonga ny vondrona rehetra ho hita amin'ny fomba fiasa mahomby.
Ny fahatsiarovan-tena ny fahatsiarovan-tena dia mampiseho ny 'tsy fantatra' amin'ilay olona efa nahatsiaro tena. Avy eo dia andraikitr'ilay olona hampahafantatra ny zavatra azony atao ny mahatsiaro ny fahatsiarovan-tena.
Ny fahamendrehana lehibe amin'ny fahatsiarovan-tena ny fahatsiarovan-tena dia ny ahafahan'ny olona mahalala momba ny foto-kevitra rehetra, amin'ny fisainana. Ny fisainana dia ny fihazonana ny fahazavana mahazatra ao anatin'ny resaka momba ny fisainana. Lazaina vetivety fa ny dingana efatra dia misaintsaina: misafidy ny foto-kevitra; mitazona ny fahazavana mahazatra amin'io lohahevitra io; mifantoka amin'ny fahazavana; ary, ny fifantohana amin'ny hazavana. Rehefa mifantoka ny hazavana dia fantatra ny lohahevitra. Amin'io fomba io, ny Thinking and Destiny dia nosoratana.
Ny tanjona manokana amin'ity boky ity dia ny hoe: Mba hilaza ny tena ao amin'ny vatan'olombelona isika fa tsy anisan'ny anton'ireo trinité tokana tsy mety maty, Triune Selves, izay tao anatin'ny fotoana fohy dia niaina niaraka tamin'ireo razanay fanta-daza sy mpanjanaka tao amin'ny vatana tsy manam-pahaizana tanteraka ao amin'ny fanjakan'ny faharetana; fa isika, ilay sela mahatsapa izao ao amin'ny vatan'olombelona, ​​dia tsy nahomby tamin'ny fitsapana lehibe, ary noho izany dia nesorina hiala tamin'io Fanjakana io ny faharetana ho an'ity lehilahy sy ny vehivavy ara-batana ara-batana amin'izao fotoana izao momba ny fahaterahana sy ny fahafatesana ary ny fisiany; fa tsy mahatsiaro izany isika satria nametraka ny tenantsika ho toy ny torimaso mahamenatra, hanonofy; fa hanohy hanonofy isika amin'ny fiainana, amin'ny alalan'ny fahafatesana sy amin'ny fiainana indray; fa tokony hanohy hanao izany isika mandra-pahatonga antsika hialantsika, hifoha, hivoaka ny tosika izay napetraky ny tenantsika; Na izany aza, dia tsy maintsy mifoha amin'ny nofintsika isika, mahatsiaro ny tenantsika ho toy ny tenantsika ao amin'ny vatantsika, ary avy eo mamerina amin'ny laoniny sy mamerina ny vatantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ao an-tokantranontsika - Ny Fanjakam-paharetana izay nahatongavantsika. mamela izao tontolo izao ho antsika, saingy tsy hita maso maso. Avy eo isika dia haka am-bavaka ny toerana misy antsika ary hanohy ny anjarantsika amin'ny lamin 'ny fandrosoana mandrakizay. Ny fomba hanatanterahana izany dia aseho ao amin'ny toko manaraka.
Amin'io fanoratana io ny sora-tanana momba ity asa ity dia miaraka amin'ny mpanonta. Tsy dia misy fotoana hanampiana amin'ny zavatra nosoratana. Nandritra ny taona maro nanomanana azy dia nangatahana matetika aho mba hampidiriko ao amin'ny andinin-tsoratra masina sasany amin'ireo andalan-teny ao amin'ny Baiboly izay toa tsy takatry ny saina, saingy, araka ny voalazan'ireo pejy ireo, dia misy dikany ny dikany, ary , miaraka amina fehezan-dalàna natao tamin'ity asa ity. Saingy tsy nivadika aho mba hanao fampitahana na fampifanarahana. Tiako hotsaraina fotsiny io asa io amin'ny fahamendrehany manokana.
Tamin'ny taona lasa aho dia nividy volombava iray ahitana ny The Lost Books of Bible and The Books of Eden. Amin'ny famakiana ireo pejin'ireo boky ireo, dia mahagaga ny mahita ireo andinin-tsoratra maro hafahafa hafahafa tsy takatry ny saina raha toa ka mahatakatra ny zavatra nosoratana momba ny Triune Self sy ny fizarana telo; momba ny famerenana indray ny vatana nofo aman-taonany ho lasa vatana nofoanana tsy lavorary sy tsy mety maty, ary ny Fanjakam-paharetana, izay ao amin'ny tenin'i Jesoa no "Fanjakan'Andriamanitra."
Mbola nisy fangatahana natao mba hanazavana ny andinin-teny ao amin'ny Baiboly. Angamba tsara izany fa natao izany ary koa ireo mpamaky ny Thinking and Destiny dia omena porofo mba hanamafisana ireo fanambarana sasantsasany ao amin'ity boky ity, izay porofo mety hita ao amin'ny Testamenta Vaovao sy ireo boky voalaza etsy ambony. Noho izany dia hanampy ampahany fahadimy ao amin'ny toko X, Andriamanitra sy ny fivavahany aho, momba ireo raharaha ireo.
New York, Martsa 1946
Tohizo ny Fampidirana ➔